“Wasaaraddii Aan Waardiyaha Ka Ahaa, Ayaan Wasiir Ka Noqday”Saleebaan Cali Koore Wasiirka warfaafinta Somaliland | Saxil News Network
Hargeysa(Saxilnews.com)-Marka la eego hannaanka siyaasadda ee Soomaalida, way adag tahay in dadka shaqooyinka hoose haya sida waardiyeyaasha oo kale ay maqaam sare ka gaaraan siyaasadda, balse ma adko in qofka uu ka meelgaaro hammigiisa.
Wasiir Suleymaan oo sanadkii 1984 ay da’diisu ahayd 18 sano jir ayaa markii uu ka qallin jabiyay dugsiga sare ayaa waxaa uu ka qeybgalay barnaamijkii la oran jiray shaqo qaran, kaas oo ardayda la gellin jiray mudo laba sano ah kahor inta aysan shaqo billaabin.
“Shaqadii qaranka ayaa la igu soo qoray idaacadda qaranka anigoo arday dugsi sare ka baxay, muddo lix ilaa toddobo bilood ah ayaa habeenkii waxaan waardiye ka qaban jiray idaacadda aan hadda wasiirka u ahay,” ayuu yiri wasiir Suleymaan oo BBC-da la hadlay.
Lahaanshaha sawirkaSULAYMAN YUSUF KOORE
“Habeenkiina waaxaan ahaa waardiye, aroortiina waxaan qaban jiray shaqooyin kale haddii ay ahaan lahayd in aan macallin noqdo ama shaqooyinka kale ee la ii diro”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Mashruuca shaqo qaran ayuu sheegay inuu ahaa mid qof walba oo soo dhameeyo dugsiga sare uu qaban jiray, waxaana uu yiri: “xafiiska aan hadda ka shaqeeyo waagaasi ma aanan geli jirin oo la iima oggoleyn, maadaam aan ahaa waardiye”.
“Wasaaraddii anigoo yar aan waardiyaha ka ahaa in aan wasiir ka noqdo macno gaar ah ayay ii sameneysaa, qofkii maqlana macno ayay u sameyneysaa, maadaam xilligaas aan ahaa wiil yar oo qori albaabka la taagan” ayuu ku daray wasiir Suleymaan oo sheegay in shaqada qaran kahor loo tababaray askarinimo.
“Waxaa muhiim ah in qofka aanu is dhiibin oo uu dedaalo, in qofka bani’aadamka uu shaqeeyoo oo marxalad kasta la dabaasho, dad badan iyo aniguba waxaan u arkaa inay guul tahay in aan wasiir ka noqdo halkii aan waardiyaha ka ahaa,”